Maqaalkan cinwaankiisu yahay midabada Jarmalka, waxaan ku baran doonnaa midabada Jarmalka. Waxaan arki doonnaa midabada Jarmalka iyo Turkiga, waxaan baran doonaa sida loo yiraahdo midabada hantida, walxaha iyo waxyaabaha Jarmal ku jira.
Mawduuca midabada Jarmalku badanaa waxay ku saleysan tahay xafididda, waxayna ku filnaan doontaa in la xafido midabada Jarmalka ee ugu isticmaalka badan nolol maalmeedka.
Sidaad ogtahay, gobollada hay'adaha, midabkooda, qaababkooda, tirooyinkooda, kala dambaynta, goobta, iwm. Erayada tilmaamaya astaamahooda waxaa loo yaqaan sifooyin. buluug qalinka, cas buufin, kulul shaah, weyn miis, soomi tareen, Weyn weedho sida wadada Buluug, Casaan, Diirran, Weyn, Degdeg, Weyn ereyada waa sifooyin.
Waxay ka dhigan tahay in midabadu sidoo kale yihiin sifooyin. Sidaad ogtahay, magacyada xarfaha magacyadooda waxaa lagu qoraa xarfaha waawayn ee jarmalka, xarfaha magacyada looma adeegsan karo xaraf. Sidaa darteed, markaan ku qoreyno midabada Jarmalka jumlad, kama faa'iideysan doono xarfaha xarfaha. tus baaskiil cas, gaari buluug ah, tufaax jaalle ah, Liin cagaaran ereyada sida cas, buluug, jaalaha ah, cagaaran ereyada waa sifooyin. Sifooyinkaani waxay muujinayaan midabada noolaha.
Midabada Jarmalka Maaddaama maadada badanaa loo adeegsado nolol maalmeedka, waa mid ka mid ah maadooyinka ay tahay in si fiican loo xafido loona barto. Markaan ka hadlayno noolaha, waxaan inta badan xusnaa midabkooda. Tusaale ahaan "Taasi cas Miyaad eegi lahayd geedka gaariga ku xiga? Sidee qurux badan!","buluug Ma keeni kartaa alaabta ay ku ciyaaraan kubbadda agteeda?Waxaan tusaale u soo qaadan karnaa jumlado sida “.
sida loo isticmaalo Jarmal ee sifooyin Jarmal weedho ah, sida loo isticmaalo Jarmal hore ee magacyada waxaannu aragnay in casharo our hore.
Hadda waxaad arki kartaa midabka Jarmalka iyo sawirrada Turkiga ee miiska:
gelbe jaalaha ah
kufsi iyo guduud
dunkelblau Ciidamada badda buluug
jahannamada dhalaalaya, cad
dunkelrot Guduud mugdi ah
weinrot cas claret
Markaad baraneyso mowduuca midabada Jarmalka, waa inaad marka hore barataa midabada muhiimka ah, oo ah midabada ugu muhiimsan. Waxaad ku baran kartaa midabada dhexdhexaadka ah ee aad isticmaashid waqti dambe sidaad rabto. Tusaale ahaan, waxaan ku siin karnaa tusaalooyin midabyo ah sida casaan, jaalle, buluug, cadaan, madow, oranji, buluug mugdi ah, bunni ah tusaalooyinka midabada Jarmalka ugu isticmaalka badan.
Arrin kale oo muhiim ah oo aan u baahannahay inaan xoogga saarno midabbada Jarmalka waa in xarfaha magacyada midabka lagu qoro shandad yar.
Sidaad ogtahay, xarfaha magacyada oo dhan af Jarmal waa xarfo.
Si kale haddii loo dhigo, ha ahaato magac habboon ama magac jinsi, xarfaha magacyada oo dhan xarfaha xarfaha ayaa lagu xarfayaa. Si kastaba ha noqotee, midabada maahan magacyo. Midabada waa sifooyin. Sidaa darteed, marka la qorayo magac midab jumlad af Jarmal ah, uma baahnin inaan ka faa'iideysano xarafka hore ee midabka. Sababtoo ah xarfaha hordhaca ah ee sifooyinka uma baahna in la weyneeyo.
Si kastaba ha noqotee, haddii aan qorno midab dhibic ka dib, haddii ereyga ugu horreeya ee jumlada uu noqon doono midab, markaa maadaama jumlad kastaa ku bilaabato xaraf weyn, ereyga ugu horreeya ee xukunku waa magac midab leh, xitaa haddii uu yahay sifooyin kale, waa la weyneeyay. Hadda, waxaan soo bandhigeynaa sawirkeenna oo la yiraahdo midabada Jarmalka oo aan kuu diyaarinnay:
Noocyada Jarmalka Sawiray
Jarmal jahannamada erey macnaheedu waa furan, dunkel Erayga macnihiisu waa madow.
Haddii aan sheegno in midabku yahay iftiin, tusaale ahaan marka aan sheegno midab buluug ah, jahannamada si ay u muujiso in ay tahay madow dunkel Waxaan isticmaalnaa ereyo.
hell blau: Midab buluug
bangiyada dunkel: buluug madow
hell grün: Cagaar cagaaran
dunkel grün: Cagaar mugdi ah
Caleenta cawska: Cagaar furan
kalluunka dunkel: guduud mugdi ah
Tusaalooyin Sare ee Noocyada Jarmalka
Haatan waxan aragnay tusaalayaasha aan kuu diyaargarownay oo ku sifeyn jirnay midabada Jarmalka:
Sawirka kor ku xusan, Das ist ein Apfel waa qeexidda qeexidda.
Der Apfel ist gürün cümlesi ayadoo la raacayo caddayntu waa bayaan muujinaysa midabka shayga.
Ogsoonow farqiga u dhexeeya farqiga iyo erayada qeexidda iyo erayada erayga.
Sawirka sare Das ist ein Knoblauch waa qeexitaanka xukunka.
Der Knoblauch ist weiß cümlesi ah ee ku qoran liistada waa bayaan tilmaameed oo sheega midabka sheyga.
Sawirka kore, Das istine e Tomate waa code qeex.
Die Tomate ist rotclugesi waa qabiil dabeecad oo sheegaysa midabka shayga.
Si aad u siiso jumladaha kor ku xusan qoraal ahaan:
Tufaaxu waa Cagaar
Garlic waa cadaan
Dhimashada Tomate ist qudhun
Yaanyada waa casaan
Die Aubergine waa lilac
Liinta waa jaalle
Waxaan ku qori karnaa foomka.
Jarmal, midabada ama sifooyinka kale ee walxaha ayaa la sheegay iyadoo la adeegsanayo qaabka soo socda, sida muuqaalka sawirada kor ku xusan:
Erayada Midabka Jarmalka
MAGACA + IST / SIND + RENK
Qaabka kor ku xusan, waxaan u adeegsaneynaa falka caawiyaha ah ee ist / sind, oo aan horey u soo aragnay, sida ist weedho keli keli ah iyo sind weedho jamac ah. Waxaan ku siinay macluumaad ku saabsan mawduucan casharradeena hore.
Hadda waxaan ku dhameyn karnaa fasalka midabka Jarmalka adoo qoraya weedho dhowr ah oo la adeegsanayo qaabka kor ku xusan.
Das Auto Auto rot: Gaduudka gaduudan
Das Auto ka gelb: Gawaarida Gawaarida
Die Blume ist gelb: Ubaxa waa huruud
Die Blumen caleenta caleemaha: ubaxyada ayaa huruud ah
Midabada Jarmalka iyo midabada waxaa loo isticmaalaa jumlada kor ku xusan.
Waxaad sidoo kale qori kartaa midabyo kala duwan iyo walxo kala duwan iyo waxyaabo kala duwan oo aad adigu isticmaasho adigoo isticmaalaya shaxda kor ku xusan.
Waan ku farxi doonnaa haddii aad ku qorto dhammaan fikradahaaga, soo-jeedimahaaga, codsiyadaada iyo su'aalahaaga ku saabsan mawduuca midabada Jarmalka ee goleyaashayada.
Casharrada Jarmalka ee boggeena waxaa lagu diyaariyey asxaab kuwaas oo hadda bilaabaya inay bartaan Jarmalka iyagoo maanka ku haya, iyo casharradeena Jarmalka ayaa lagu sharaxay qaab aad u faahfaahsan oo la fahmi karo.
Adiguba Midabada Jarmalka Isku day inaad sameyso jumlado kala duwan oo ku saabsan mowduuca sida jumladaha kore ee kor ku xusan.
Sidan oo kale, waxaad si fiican ugu baran kartaa midabada Jarmalka si fududna ma illaawi doontid.
Iyada oo rajadeena ugu wanaagsan ...
Tags: Magacyada midabka Jarmalka, Magacyada midabka Jarmalka, Midabada Jarmalka, Midabada Jarmalka iyo Turkic, Midabada Jarmalka Jarmal, Midabada Jarmalka, Midabada Jarmalka, Qaadashada midabada, Midabada Jarmalka Turkiga